Bloc fandidiana fo :SAMBANY NO NISY ETO MADAGASIKARA -
AccueilRaharaham-pirenenaBloc fandidiana fo :SAMBANY NO NISY ETO MADAGASIKARA
Sambany teo amin’ny tantaran’ny hopitaly Soavinandriana no nahazo fitaovana hahafahana manao fandidiana fo. Hatramin’izay dia atsy amin’ny nosy La Réunion no akaiky indrindra raha sanatria ka misy fahavoazana ny fo dia na alefa any Inde na any Parisy ireny olona ireny.
Tsindrina tsara anefa ety am-piandohana fa natao ho an’ny zaza ihany ny fandidiana atao ilay antsoina hoe « à cœur fermé » fa tsy à cœur ouvert hoy ny tale jeneralin’ny hopitaly, MGB Rakoto Fanomezantsoa. Ny an’ny lehibe dia mbola alefa mankany ivelany aloha fa mbola tsy vita eto. Tafiditra ao anatin’ny fankalazana ny faha-125 taonan’ny hopitaly no nitokanana ny ny « Bloc opératoire chirurgie cardiaque », « scanner », ny efitrano fanaovana fandidiana ao amin’ny rihana fahefatra, ny fanitarana ny efitrano fandraisana vonjiaina. Araka ny nambaran’ny Tale jeneralin’ny Hopitaly, MGB Rakoto Fanomezantsoa dia efa 22 taona no nanofinofisana ny hahazoana ity fitaovana fandidiana fo ity saingy izao vao azo izany. 4 ihany ny dokotera izay afaka manao ny asa eo anivon’ny hopitaly. Vokatry ny fiaraha-miasa teo amin’ny « Médecin du Monde » no nahazoana izany. Ny tanjona dia ny mba hampihenana ny tahan’ny fahafatesan’ny zaza latsaky ny 13 taona noho ny aretim-po mahazo azy. Araka ny nambarany ihany dia miisa 25 ka hatramin’ny 30 isan-taona ny zaza mandalo fandidiana vokatr’ ity aretina ity. Nahatratra 700 ny isan’ny zaza nodidiana tao anatin’izay 20 taona izay.
Lafo nefa novidiana
Tsy izay ihany fa mbola nisy koa ny fahazoana Scanner izay mitentina 2 miliara ariary, izay tena efa maharaka ny teknolojia satria mahavita ny fitiliana ny aretin’ny olona hatramin’ny 128 baret, nisy koa ny fitaovam-pitsaboana hafa nomen’ny Filoham-pirenena. Mba hahafahana manao fitiliana tsara ny olona marary. Na izany aza anefa dia mbola tsy ampy ny fitaovana satria mbola tsy mahavita mandidy olon-dehibe eto amin’ny hopitaly mikasika ny aretim-po. Amin’ny olona 5 izay miditra hopitaly eny Soaviandriana dia 2 amin’ireo no voan’ny Avc, ny roa voan’ ny lozam-pifamoivoizana. Manao ny ainy tsy ho zavatra mihitsy ny fitondrana indrindra fa ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery, amin’ny fiarovana ny fahasalamam-bahoaka. Porofon’izany ny fitokanana Csb isaka ny toerana alehany ary efa ao anatin’ny fandaharan’asany ny fanaovana Csb iray isaka ny fokontany. Ho an’ireo fandidiana rehetra izay atao eny amin’ny hopitaly dia tsy maintsy misy foana ny mpanohana tsy miankina mifanampy amin’ny fitsaboana ny olona. Atsy ho atsy mantsy dia efa hisy izay mpanohana izay satria efa hifarana ny an’i Medecin du Monde.